Akụkọ - Ihe Dị Iche n’agbata Ezigbo & Nrụgide Nrụgide Cleanroom
Kemgbe afọ 2007 ， Airwoods raara onwe ya nye iji nye hvac ihe ngwọta maka ọrụ dị iche iche. Anyị na-enyekwa ọkachamara ngwọta ụlọ dị ọcha. Site na ndị na-emepụta ụlọ, ndị injinia oge niile na ndị njikwa ọrụ raara onwe ha nye, ndị otu anyị ọkachamara na-enyere aka n'akụkụ ọ bụla nke ihe okike dị ọcha-site na imepụta ụlọ na mgbakọ-iji nye usoro nhazi ahaziri iche na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ma onye ahia ọ choro ọkọlọtọ ma ọ bụ mpaghara pụrụ iche nke ukwuu; positivelọ nhicha ikuku dị mma ma ọ bụ ụlọ mkpofu ikuku na-adịghị mma, anyị na-arụ ọrụ nke ọma na nkọwapụta nke ndị ahịa, iji mepụta ihe gafere oke atụmanya, ọ bụghị mmefu ego.
Ihe dị iche na ime ụlọ dị ọcha na nke na-adịghị mma
Ọ bụrụ n ’ị na-atụle ebe ị ga-edo ihe, ị nwere ike ịnakọta ozi buru ibu dịka o kwere mee. Kedu ụdị ụlọ nhicha dị mma maka gị? Kedu ụkpụrụ ụlọ ọrụ ị ga-ezute? Ebee ka ụlọ mposi gị ga-aga? Get nweta foto a. Otu ozi ị nwere ike ịbara gị uru bụ ịghọta ihe dị iche na ime ụlọ ịsa ahụ dị mma na nke adịghị mma. Dịka ikekwe ịmaraworị, ikuku na-arụ ọrụ kachasị na ịdebe ebe ị na-adị ọcha, ma ọ nwere ike ịbụ na ị maghị bụ na nrụgide ikuku nwere ike inwe nnukwu mmetụta na nke ahụ. Ya mere, nke a bụ nkọwa mebiri emebi banyere nrụgide ikuku ọ bụla na nke adịghị mma.
Kedu ihe bụ ezigbo ụlọ mposi?
Nke a pụtara na nrụgide ikuku dị n'ime ebe ị na-ehicha ihe karịrị gburugburu gburugburu. A na-enweta nke a site na iji usoro HVAC, nke a na-enweta site na ịmịpụ ikuku dị ọcha, n'ime ebe a na-ehicha ahụ, n'ozuzu site na ụlọ.
A na-eji nrụgide dị mma na ụlọ mposi ebe ihe kachasị mkpa na-eme ka nje ma ọ bụ ihe ọ bụla nwere ike ịba n'ime ụlọ ọcha. Ọ bụrụ na enwere ihihi, ma ọ bụ ọnụ ụzọ meghere, a ga-amanye ikuku dị ọcha na ebe a na-edebe ihe ọcha, karịa ikunye ikuku a na-asachapụghị na ya. Nke a na-arụ ọrụ nwetụrụ yiri ka deflating a balloon; mgbe ị na-atọghe balloon, ma ọ bụ gbapụta ya, ikuku na-apụ n'ihi na nrụgide ikuku na balloon dị elu karịa nrụgide nke ikuku gburugburu.
A na-eji ụlọ ịsa ahụ dị mma na-arụ ọrụ nke ọma maka ụlọ ọrụ ebe ọrụ nhicha ahụ na-arụ ọrụ iji mee ka ngwaahịa ahụ dị ọcha ma nwee nchekwa site na nrụrụ, dịka na ụlọ ọrụ microelectronic ebe ọbụna obere ihe nwere ike imebi iguzosi ike n'ezi ihe nke microchips a na-arụpụta.
Kedu ụlọ mkpocha adịghị ike?
N'adịghị ka ụlọ nhicha nke ikuku dị mma, ụlọ ọrụ ikuku na-adịghị mma na-ejigide ọkwa ikuku nke dị ala karịa nke ụlọ gbara ya gburugburu. A na - enweta ọnọdụ a site na iji usoro HVAC nke na - enyocha ikuku n'ime ụlọ ahụ, na - agbanye ikuku dị ọcha n'ime ụlọ dị n'akụkụ ala ahụ ma na - ackingụ ya n'azụ ụlọ.
A na-eji nrụgide ikuku na-adịghị mma na ụlọ mposi ebe ihe mgbaru ọsọ bụ iji gbochie mmetọ ọ bụla nwere ike ịgbanahụ ụlọ ọcha. Ekwesịrị ịmechi windo na ọnụ ụzọ kpamkpam, yana ịnwe nrụgide dị ala, ikuku n'èzí ụlọ ọcha ahụ nwere ike ịba n'ime ya, karịa ịpụ na ya. Were ya dị ka iko efu nke ị tinyere na bọket mmiri. Ọ bụrụ na ị kwanye iko ahụ n'ime mmiri rightide, mmiri na-asọba n'ime iko ahụ, n'ihi na o nwere nrụgide dị ala karịa mmiri ahụ. Ime ụlọ ịsa ahụ na-adịghị mma dị ka iko efu ebe a.
Isi ihe dị iche n'etiti ha abụọ bụ na sistemụ nrụgide dị mma na-echekwa usoro ahụ ebe ọ na-echebe onye ahụ .Ngwa ụlọ ikuku na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụpụta ngwaahịa ọgwụ, na-eme nyocha nke mmiri ọgwụ, yana n'ụlọ ọgwụ iji kpọpụ ndị ọrịa na-efe efe nke ukwuu. Ikuku ọ bụla si n'ime ụlọ pụta ga-ebu ụzọ si na nzacha pụta, na-ahụ na enweghị mmetọ ọ bụla nwere ike ịpụ.
Myirịta dị n'etiti nrụgide dị mma na mkpocha nrụgide na-adịghị mma?
Ọ bụ ezie na ọrụ nke nrụgide dị mma na ụlọ ịsa ahụ nrụgide na-adịghị mma dị nnọọ iche, ha bụ ụfọdụ myirịta dị n'etiti abụọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ụdị abụọ ahụ chọrọ iji:
1. Ike HEPA nzacha, nke, yana akụkụ HVAC ndị ọzọ, chọrọ nlezianya nlezianya
2. Ọnụ ụzọ na-emechi onwe ya na windo ndị a na-emechi emechi, mgbidi, uko ụlọ, na ala iji kwado ndozi nke ogo ikuku kwesịrị ekwesị
3. Ọtụtụ mgbanwe ikuku kwa awa iji hụ na ikuku dị mma na ọnọdụ nrụgide
4. Ante-ụlọ maka ndị ọrụ ịgbanwe n'ime uwe nchebe achọrọ ma nyefee ihe ndị dị mkpa na akụrụngwa
5. In-line pressure monitoring usoro
Ọ bụrụ n’inwee ajụjụ ọ bụla gbasara ụlọ ịsa ahụ ikuku na-adịghị mma na nke ziri ezi, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta ụlọ ọcha maka azụmahịa gị, kpọtụrụ Airwoods taa! Anyi bu ulo ahia gi ka anyi nweta ihe zuru oke. Maka ozi ndị ọzọ gbasara ike ịsacha ụlọ anyị ma ọ bụ ka gị na ndị ọkachamara anyị wee kọwaa ihe gbasara ụlọ ịsa ahụ, kpọtụrụ anyị ma ọ bụ rịọ maka nkwuputa taa.